कक्षा १२ को परीक्षा सुरु, ४ लाख ३२ हजार ५ सय सहभागि – Rajya TV
कक्षा १२ को परीक्षा सुरु, ४ लाख ३२ हजार ५ सय सहभागि
कक्षा १२ को परीक्षा आजबाट सुरु भएको छ । परिक्षामा देशभरका ४ लाख ३२ हजार ५ सय विद्यार्थीहरुको सहभागिता रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण गत वैशाखमा हुन नसकेको परिक्षा आजदेखि सुरु भएको हो ।
परीक्षार्थीहरुबीच कम्तीमा दुई मिटर दुरी कायम गरी एउटा कोठामा २० जनासम्म मात्र राख्नेगरी व्यवस्था मिलाइएको बोर्डका अध्यक्ष प्रा. डा. चन्द्रमणि पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
परीक्षार्थीहरु, केन्द्राध्यक्ष र निरीक्षकहरुले अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने छ । उनीहरुलाई ज्वरो नापेर मात्रै परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश दिइने छ । परीक्षा केन्द्रमा सेनिटाइजरको समेत व्यवस्था गरिएको बोर्डका अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो ।
परीक्षामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाएको छ । परीक्षा सन्चालनमा स्थानीय तहले सहयोग गरेका छन् । परीक्षाको अनुगमन र निगरानी गर्न बोर्डमा कन्ट्रोल रुमको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।